Starbucks na-ebupụta Social Network | Martech Zone
Tọzdee, Machị 20, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Echiche m nke Starbucks akatabeghi aka bilie! Itinye netwọkụ mmekọrịta na-arịọ arịrịọ site n'aka ndị ahịa ozugbo na ụlọ ahịa ndị ha na-akwado nwere ike ọ gaghị abụ echiche ọjọọ. Y'oburu na odi ahia ahia nke g’enwe ike ime nke oma na ịkparita mmadu, Starbucks nwere ike ibu ya. Ọ bụ nnukwu akara, ọ bụ ebe niile, ndị mmadụ na-eri ahụ (n'ụzọ nkịtị) na ngwaahịa ha, ndị ahịa hụrụ ya n'anya.
Starbucks dị elu na mgbidi. Ha enwekwaghị mmasi ha na ndị na-eso ụzọ, ụgwọ ọrụ na-arị elu, nnukwu baristas na-esiri ike ịchọta, mmefu ndị ahịa na-agbada, ndị asọmpi dịka McDonalds na-amalite ịmalite ịmalite ịhapụ ndị na-elekọta ụtụtụ. McDonalds ọbụna tinyegoro Starbucks n'isi na isi uto ule.
Ihe kpatara na anaghị m anọ na Starbucks oge niile
Onwe m, m na-eleta Starbucks ọkara ka m na-emebu. Enwere m anụ ọkụ ọkụ nke m na-enweta n'ụlọ kọfị dị na mpaghara m ma nwee ekele maka eziokwu ahụ na ego m na-alaghachi na akụ na ụba mpaghara. Starbucks kwụsịrị mgbe ọ malitere ịhụ ha obere mgbochi ma ewezuga ibe ha na ikuku na-efu m $ 30 kwa ọnwa. Naanị m na Starbucks mgbe m Woodlọ Kọfị Greenwood, Egwuregwu Bean erughị eru.
na Howard Schultz laghachi na oche ọkwọ ụgbọala, ikekwe Starbucks nwere ike iguzo. Anyị ga-ahụ. Echere m bụ na Social Network ga-enwe ọnụọgụ nke okporo ụzọ, agara m ahọrọ blog ma rịọ nzaghachi site na ọdịnaya m nwere ike ịdabere na obere.
Kedu ihe echiche m ga-abụ maka Starbucks? Ala oche.
Ezigbo kọfị ị na-enweghị dọkịta na ọkara ping nke mmiri ara ehi mebie ya ga-abụ echiche m Starbucks.
Pint, n'ezie. Otu ụbọchị, m ga-amụta ịgụgharị tupu ịpị ịbanye.
Akwụsịrị m ị drinkingụ Starbucks mgbe baristas kwụsịrị ile gị anya mgbe ị na-ewere iwu gị na inyeghachi mgbanwe. Onweghị ihe gbagwojuru ndị ahịa anya na klaasị ụwa, ma Starbucks anaghị enweta ya. Na-eche ma ọzụzụ ụbọchị ọkara ahụ enyere aka ??
Starbucks aghọwo McDonalds kọfị, n'echiche m. Dịka Eric kwuru n’elu, ndị ahịa arịrịala n’ezie. Ndị ọrụ ahụ n'ozuzu yiri ka ha enweghị mmasị n'ụzọ ha si eme n'ọtụtụ ebe nri ngwa ngwa, na ngwaahịa ngwaahịa ahụ ekwekọghị (ọ bụ ezie na m ga-ekwu na na McDonalds ọ na-agbanwe agbanwe, ọ bụghị na m na-eri nri ebe ahụ ọzọ). Ha ewerela ihe na-enwebu ihe nzuzo na ya ma bụrụ ihe nkịtị.
Na nchebe ha, echeghị m na otu ị ga - esi jigide oke uru na ahịa dị ka asọmpi dị ka kọfị bụ ụbọchị ndị a. Echere m na site na blanketing nke ụwa na ụlọ ahịa Starbucks a ga-enwe mfu na ogo zuru oke nke ahụmịhe ị nwetara mgbe ị gara, mana ọ bụ ihe nwute. Ọ ga-amasị m ịhụ ha ka ha meziwanye ihe, mana echere m na ha nwere ọtụtụ ihe ịma aka n'aka ha.
Amaghị m ma ọ bụrụ na Starbucks chọrọ netwọkụ mmekọrịta karịa Bode Miller chọrọ ịhapụ netwọkụ mmekọrịta SkiSpace. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-emepụta mmetụta ntanetị ma na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya baa uru, ya mere, niche saịtị na-akpaghị aka na-agbapụ onwe ha na ụkwụ. Opekempe, IMHO 😉
Echere m na m kwenyere na gị, Dave. Maka 'obere oge', ọ dị ka ha anaghị arịọ arịrịọ ma ọ bụghị 'netwọkụ mmekọrịta' n'echiche. Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ma ọ bụrụ na ha mejuputa 2 kachasị elu - oche ikuku enweghị ntụsara ahụ & nke ọma.
Ma ndị na-patrons gburugburu ogologo… ihe a uka mmepụta kọfị ụlọ nwere ike ghara ịghọta. Don't naghị ere ihe mgbe enweghị ebe ịnọdụ ala!
Anyị na-ahụ nke a oge niile ọ bụghị anyị? Great echiche, ihe itunanya ngwaahịa na ụlọ ọrụ, akpịrịkpa iji uru nke a na-ekpo ọkụ ika… wee malite ịgbasa dị ka crazy na tinye-na ngwaahịa na ọnọdụ na-amalite ida ya isi.
M ka na-akwụsị Starbucks m kwa ụbọchị mana ọ tufuru ọtụtụ arịrịọ ya n'ụzọ. Ọ masịrị m na Shultz alaghachila n'isi… na-echetara ọrụ na-alọghachi Apple… o kwesịrị iweghachi ha nso ịnye ahụmịhe dị jụụ. Njikọ mgbasa ozi mmekọrịta na-emepe ụzọ ma ọ dịkarịa ala.
Echiche m maka ha ga-abụ ige ntị nke ọma maka ihe kpatara ndị ahịa dị ugbu a anaghịzi abịa, ndị ọzọ na-aga McDonalds na ihe kpatara ndị folks ji ahụ ya nke ukwuu nke nsogbu ọbụlagodi ịtụle. Otu ihe m ga-etinye ozugbo bụ na ha ga-akwụsị nickle na diming ahụmịhe. Ekwenyere m banyere nko na ikuku. Ka o sina dị, azịza ha dị ebe ahụ. Akara dị ike nke ukwuu maka ha ka ha ghara ịchọta ụzọ iji dozie ya.
Ekwenyere m Phil. M na-eche ihe ole furu efu naanị n'ihi na Starbucks enweghị 'isi ụgbọ ala ọhụrụ ahụ'?
Trendbụ onye na-ewu ewu bụ ntọala siri ike iji wulite azụmaahịa gị ma ọ na-eme ka ọhụụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka onwe ya na mkpa ọ dị. Echere m na ọtụtụ ihe ịga nke ọma Starbuck bụ ihe ọ ofụ ofụ nke ihe ọ drinkụ drinkụ dị jụụ nke nwere ọtụtụ okwu na ọnụ ahịa dị oke ọnụ.
Ee, obi ụtọ ụgbọ ala ọhụrụ ahụ agwụla. Echetara m mgbe ndị mmadụ na-achị m ọchị maka ịkwụsị na iji asụsụ mba ọzọ ọhụrụ ahụ m mụtara.
Probably eleghị anya kụrụ ndị isi nke ha… fad ma ọ bụ a oké igba egbe na inwe 'ụtụtụ si ahụmahụ' na furu efu ụzọ. Oge ga-agwa.
Mgbe m na-aja Starbucks mma maka imepụta usoro nke na-ewetara ndị ahịa n'ime usoro ọhụụ ha, enwerekwa ihu ala ị na-ekwughị. Ndị asọmpi, sitere na nke Peet na nke ụlọ ahịa kọfị oghere dị n'ime oghere, nwekwara ike ịnweta mkparịta ụka ọhụụ nke Starbucks. Nke a bụ akụ nke ihe ndị ahịa na-achọ, ihe anwalela, na ihe na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-anaghị arụ ọrụ. Iji bulie ya elu, Starbucks na-arụ nnukwu ọrụ nke mmekọrịta, si otú a na-enyekwu nchọpụta ahịa na-akwụghị ụgwọ.
M ka na-akwado ihe Starbucks mere, mana ọ bụrụ na m bụ obere oge, m ga na-atụgharị bọọdụ ntụnye ahụ kwa ụbọchị!
More banyere isiokwu a akọwapụtara site na ọkwa azụmaahịa azụmaahịa na: